आजको राशिफल २०७८ साल असोज ३ गते आइतबारGandaki Press
वि.सं. २०७८ साल असोज ३ गते आइतबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ सेप्टेम्बर १९ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरद्ऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्रशुक्लपक्षको चतुर्दशी तिथि मध्यरात्रि पछि ५:०७ बजेसम्म, त्यसपछि पूर्णिमा रहनेछ ।
मेष : सहयोगीहरुको उचित रुपमा साथ पाइनेछ । नयाँ वस्तुको ज्ञान पाइनेछ । आकस्मिक लाभको योग रहेको छ । आर्थिक पक्षमा सुधार भएर जानेछ भने विवादित कार्यको अन्त्य हुनेछ । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ ।
वृष : प्रतिष्ठित कार्य गर्न सक्दा प्रशंसा मिल्नेछ । व्यवस्थापन पक्ष सबल रहनेछ । नयाँ संझौताले पछिसम्म लाभ मिल्नेछ । काम कार्यको शिलसिलामा यात्रा हुनेछ । कृयाशिलता र लगनशिलताको बृद्धिविकास हुनेछ ।
मिथुन : आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ । धर्मकर्ममा रुचि बढ्नेछ । अरुको सस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदा आनन्द लाग्नेछ । घरायसी समस्या हल भएर जानेछ । परिश्रमको उचित मूल्यांकन पाइनेछ ।
कर्कट : विश्वास गरेका व्यक्तिले धोका दिनेछन् अरुको भर नपर्नुहोला । स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ । आफ्नै निर्णयले आँफैलाई समस्यामा पार्नेछ । खर्चभार थपिनेछ । विना तयारी कार्य गर्दा घाटा लाग्न सक्छ, सजक रहनु होला ।
सिंह : आत्मकारक ग्रहको दृष्टि परेको छ । मनोरञ्जनात्मक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । अपरिचित व्यक्तिको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछ । राजनैतिक क्षेत्रबाट समेत सम्मान मिल्ने समय रहेको छ ।
कन्या : रोकिएका वित्तीय कारोवारले गति लिनेछन् । सोच्न सक्ने क्षमताको विकास हुनेछ । नयाँ अवसर मिल्नेछ । सामान्य समस्यामा नआत्तिनु होला, मान्यजनको सरसल्लाहमा अघि बढ्ला सफल भइनेछ ।
तुला : काम गरेर आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ । सन्तानसँगको रामाइलो यात्रा होला । बौद्धिक कलाको बृद्धि विकास हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । सानो प्रयासले नै ठूलाठूला कार्य सहज तवरले बन्ने छन् ।
बृश्चिक : व्यवसायमा न्यून उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ । अध्ययनमा मन जाने छैन । अग्रजको सल्लाहमा कार्य गर्नुहोला । अनावश्यक झमेलामा परिनेछ । शारीरिक कमजोरीले गर्दा काम कार्य गर्न असहज हुनेछ ।
धनु : कलात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ । एकल प्रयासले नै विशेष कार्यमा सफलता मिल्नेछ । मांगलिक कार्यमा सरिक हुने अवसर मिल्नेछ । साझेदारी कार्यबाट लाभ मिल्नेछ । काम प्रतिको लगनशिता बढेर जानेछ ।
मकर : वाक् कलाको प्रशंसा पाइनेछ । अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानिले दिगो रुपमा फाइदा लिन पाइनेछ । हर्ष बढ्नेछ । सानो कुरामा अलमलमा परिन सक्छ, पूर्व तयारीका साथ कार्य गर्दा सफल भइनेछ ।
कुम्भ : विपक्षीहरु पनि सहमतिमा आउन बाध्य हुनेछन्, इच्छाशक्ति बढ्नेछ । नयाँनयाँ प्रस्तावहरु आउने छन् । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहने देखिन्छ । पूराना समस्यालाई हल गर्दै नयाँ संझौता गर्ने खाले समय रहेको छ ।
मीन : गोपनीयता बाहिरीँदा समस्यामा परिन सक्छ, संयम रहनु होला । नयाँ आर्थिक कारोवार उचित देखिन्न । दैनिकीमा नै व्यस्थ रहनु होला । आम्दानीको तुलनामा खर्चभार बढ्दा तलमेल मिलाउन गाह्रो पर्नेछ ।